Laftagareen oo dib ugu laabtay Muqdisho si uu qeyb uga noqdo ololaha doorashada | KEYDMEDIA ONLINE
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa dib ugu laabtay magaalada Muqdisho isagoo qeyb ka noqonaya ololaha doorashada.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen oo kamid ahaa Golihii wadatashiga qaran maalmahana ku maqnaa degaannada Koonfur Galbeed ayaa dib ugu laabtay magaalada Muqdisho.
Socdaalka madaxweyne Laftagareen ayaa lagu sheegay inuu qeyb ka yahay Olilihii doorashada oo ka billowday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, waxa uuna latashiyo ugu tagayaa kooxda Farmaajo oo uu kamid yahay kuwa ka shaqeynaya dib usoo laabashada mar kale iyo Farmaajo.
Dhawaan ayey ahayd markii lasoo gudbiyay xubnihii guddiyada doirashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa xalay gudbiyay liiska xubnaha guddiyada doorashooyinka ku matalaya labadaas maamul.
Xubnaha uu soo gudbiyay Madaxweyne Cabdicasiis ayaa la aaminsan yahay inuu talo ku leeyahay Agaasimaha awodda badan ee Fahad Yaasiin, iyadoo socdaalka uu maanta ku yimid Muqdisho uu kula kulmi doono kooxda ay isku xulufada yihiin ee Fahad iyo Farmaajo